Ohatra 12 amin'ny fitondran-tena mitady fankatoavana (+ Ahoana ny famoahana ny filanao fanamarinana) - Blog
Ohatra 12 amin'ny fitondran-tena mitady fankatoavana (+ Ahoana ny famoahana ny filanao fanamarinana)
Manontany tena ve ianao hoe maninona ianao no mitady ny fankasitrahan'ny hafa be loatra?
Sa maninona ianao no mahatsapa fa mila manao zavatra hampifaliana ny hafa fa tsy ny tenanao?
Angamba ianao manao izany ary manelingelina anao. Na angamba tsy ianao, satria tsy fantatrao ny antony anaovanao azy.
Ity karazana fitondran-tena ity dia azo raisina lalina ao anaty psyches fa tsy hitantsika fotsiny ny zava-misy izay mibanjina antsika amin'ny tarehy.
Avy aiza anefa izy io ary manao ahoana ny endriny?
Manomboka amin'ny fahatokisan-tena (na tsy fisian'izany) izany rehetra izany.
Ny tena fototry ny fitondran-tena mitady fankatoavana dia ny fahatokisan-tena ambany.
izany fahatsapana ho ambany mipoitra avy amin'ny lafin-javatra maro. Ny sasany mifandraika amin'ny toetranao voajanahary, fa ny hafa kosa avy amin'ny fitaomana ivelany toy ny fitaizana anao, ny traikefa ara-kolotsaina, ny fanabeazana ary ny fiainanao miasa.
Rehefa mifampiorina izy ireo rehefa mandeha ny fotoana, ny filana mitady ny fankatoavan'ny hafa amin'izay zavatra ataontsika rehetra ary lazaintsika fa mihamafy.
Raha tsy mino ny tenany ny olona iray ary matetika mitsikera tena dia toa voajanahary fotsiny ny mitady fanamarinana avy amin'ny hafa.
Fomba fitadiavana 12 fankatoavana
Ireto misy ohatra 12 amin'ny karazana fitondran-tena izay fahita matetika rehefa manandrana mahazo fankatoavana sy fanamarinana isika.
1. Fandraisana manokana ny tsy fifanarahana.
Rehefa misy olona tsy mifanaraka amin'ny zavatra nolazainao na nataonao dia raisinao am-po toy ny kely fotsiny ilay izy ary mahatsiaro ho sosotra na manevateva mihitsy aza?
ahoana no hilazana raha manintona anao
Ity dia valiny mahazatra ho an'ny vahoaka mampifaly satria tsy nahomby ny fikatsahana fankatoavana.
2. Manova na mampifanaraka ny fomba fijerinao manoloana ny tsy fankasitrahana hita.
Efa namoaka ny hevitrao momba ny raharaha sasany ianao, na manan-danja na tsia, ary misy mamaly amin'ny fomba fijery mifanohitra.
Miaro mafy ny toeranao ve ianao sa mahita fa manalefaka ny adihevitrao mba hifanaraka akaiky kokoa amin'ny azy ireo?
Ny hevitry ny mpikatsaka fankatoavana dia miova arakaraka ny olona iresahany satria tsy manana fahatokisana ny zavatra inoany izy ireo ary maniry ny tsy hanalavitra ny hafa amin'ny alàlan'ny fomba fijery mifanipaka.
3. Matahotra ny hiteny hoe ‘tsia’ noho ny tahotra ny tsy fankasitrahana.
Mpanararaotra mpanera be loatra ve ianao? Milaza ‘eny’ foana ve ianao rehefa asaina manao zavatra, rehefa ny valiny voajanahary dia milaza hoe 'tsia'?
Ny havizanana ara-batana sy ara-pihetseham-po no vokatr'ity fihetsika ity ary mitarika anao hankahala ny zavatra rehetra nanoloranao tena.
Saingy miainga avy amin'izany fa mila sitrakao sy ny fikatsahanao fankatoavana.
4. Tsy mijoro amin'ny zonao manokana.
Ny maha-damaody olombelona - tokony hodiavin'izay misafidy hanao izany - dia mora lavitra noho ny miteny hoe 'he, tsia, tsy rariny izany' ary mijoro ho anao .
Ny tsy fanaovana tsipika sy hiteny hoe ‘tsia’ dia manamafy ny tsy fahatokisanao tena fotsiny ary mahatonga ny hafa tsy hihevitra anao firy.
5. Mahazo ny sain'ny olona amin'ny alàlan'ny fifosana.
Mahatsapa faniriana hitantara angano ve ianao mba hahatonga ny tenanao ho tsara kokoa na mahay sa misy fahalalana bebe kokoa?
Ny fizarana resadresa-poana dia manome anao hery hampiaiky volana ny hafa, ho ivon'ny fiheverana ary hahazoana kudos. izany vonjimaika manamafy ny fahatokisanao tena ambany.
6. Miseho hanaiky olona (am-bava / tsy am-bava) rehefa tsy tianao.
Impiry ianao no mahita ny tenanao mihaino hevitra mazoto maneho hevitra fa tsy ekenao, nefa toa miombon-kevitra amin'izany ihany?
Amin'ny fanehoana fanohanana ny fomba fijery iray izay tsy ekenao, na amin'ny teny na amin'ny lohanao, dia tsy marina amin'ny tenanao ianao. Tianao fotsiny ny hanaiky anao sy hitia anao io olona io.
7. Tsy mitaraina rehefa nahazo serivisy na entana tsy mahafa-po.
Impiry ianao no nimenomenona sy nitaraina momba ny sakafo na ny serivisy ao amin'ny trano fisakafoanana, fa, rehefa nanontany tamim-pifaliana ny mpandroso sakafo raha toa ka tsy maninona ny zava-drehetra, dia nihatokatoka ny lohanao ary nilaza fa milamina sy milamina ny zava-drehetra?
Ny ratsy indrindra azonao atao dia ny mamela tendrony kely kokoa, sa tsy izany?
Na nividy zavatra tsy mety amin'ny tanjona ianao, fa tsy manana fahasahiana mamerina izany any amin'ny magazay.
Rehefa tsy mandray olana amin'ireo zavatra ireo ianao dia manamafy ny tsy fanananao tena-tena. Milaza amin'ny tenanao ianao fa tsy manan-jo hanao zavatra tsara indrindra.
8. Mody mody mahafantatra na mahatakatra zavatra.
Fotoana tsy ampoizina rehefa misy mieritreritra hoe mahalala zavatra ianao na manana fahaizana manokana…
… Ny valintenin'ny mpikatsaka fankatoavana ho valiny amin'ny toe-javatra toy izany dia ny fanaovana hosoka.
Ny zavatra, sivy heny amin'ny folo, dia miharihary ny fisandohana.
Mampalahelo fa araka ny mety ho hitanao fa tsy ny fankatoavana tadiavinao dia mahazo fanamelohana na fanesoana ianao.
Ahoana ny fomba hitenenana tsia amin'ny olona (ary tsy hahatsapa ho ratsy amin'izany)
Ahoana no tsy miraharaha izay eritreritry ny olona
Hampitomboana ny tombam-bidinao manokana, ataovy tsy tapaka ireo zavatra kely 10 ireo
Ahoana ny fomba hamafisana kokoa amin'ny dingana tsotra 5
Ohatra 9 amin'ny fitondran-tena tadiavina ny sain'ny olon-dehibe
9. Mahatsapa fa mila miala tsiny na dia tsy nisy aza ny tsy fankasitrahana.
ianareo milaza miala tsiny indrindra .
Na inona na inona zava-niseho ary na nanana na nanatrika izany ianao na tsia - ary na dia tsy nisy aza ny feo manome tsiny dia ny olona falifaly no ho voalohany miala tsiny.
Raha tsy misy ny lesoka na ny fitondran-tena ratsy ataonao, nahoana ianao no tokony hahatsapa fa mila miala tsiny?
10. Manantena fiderana na fanjonoana ho azy ireo sy / na ho sosotra dia tsy ho avy izy ireo.
Vitsy ny zavatra manome ny fanamarinana tadiavinao tsara kokoa noho ny fandokafana.
Ny mpikatsaka fankatoavana dia mety minia manao fanahy iniana hanery ireo olona ifaneraserany hidera fiderana.
Matetika, izany fiderana izany dia sady tsy mendrika no tsy mety.
Ny fanitarana an'ity karazana fitondran-tena ity dia ny fahatsapana ho sosotra rehefa tsy tanteraka ny fiderana izay irinao.
11. Tsy mahavita miatrika fitsikerana rehetra.
Raha ny hahazoana sitraka amin'ny hafa no tanjonao, dia tsy zaka mihitsy ny hevitra fitsikerana. Midika izany fa tsy nahomby tamin'ny fomba sasany nahatratrarana ny tanjonao ianao.
Io valinteny io dia matetika miorim-paka amin'ny fahazazako rehefa ny fanakianana ny ray aman-dreny na koa ny sazy noho ny tanjona na ny asa tsy nahomby dia nanosika anay hangataka fankatoavana amin'ny manaraka.
12. Ny fihetsika amin'ny fomba mifanohitra amin'ny zavatra inoanareo manokana.
Fomba fanao mahazatra any amin'ny lisea ity: miditra amin'ny andian-jatovo fotsiny mba ho isan'ireo olona ‘malaza’, na dia, ao am-ponao aza ianao, dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra lazainy sy / na ataony.
Azo famelana izany amin'ny fahazazanao, fa tsy dia be loatra rehefa olon-dehibe ianao.
izany no mahatonga ahy hanana olana atokisana
Ny mpikatsaka fankatoavana dia afaka mahita mora foana amin'ny toe-javatra iray izay tsy anarahany ny fony. Manaraka ny lohan'izy ireo mahafinaritra ny olona izy ireo, na dia miteraka fifanoherana amin'ny zavatra inoan'izy ireo aza izany.
Ahoana ny fijanonana amin'ny fikatsahana fanamarinana
Ity fizarana ity dia avy amin'ny tsindrimandry avy amin'ity lahatsoratra lehibe avy tamin'i Adam Eason ity: https://www.adam-eason.com/let-go-approval-seeking-behaviour/
Raha tadidio fa ity fitondran-tena mitady fankatoavana ity dia valinteny efa raiki-tampisaka, tsy ho vahaolana haingana izany.
Saingy ireto dingana manaraka ireto dia ahafahanao mahatakatra ary avy eo manova tsikelikely ny fomba fijerinao rehefa mampitombo ny fanajan-tena ianao ary milatsaka ny filanao fanamarinana tsy tapaka.
1. Fakafakao hoe taiza no niandohany.
Matetika kokoa noho ny tsy izy, io fihetsika io dia miorim-paka amin'ny fahazazany.
Angamba misy ifandraisany amin'ny fitaoman'ny ray aman-dreny na angamba nanananao izany fahasarotana mahazo namana any am-pianarana ary lasa matahotra ny holavina vokatr'izany.
Ny fandaniana fotoana hisaintsainana an'io vanim-potoana io dia mety hanampy anao hamantatra ireo anton-javatra izay nahatonga ny filanao nitady fankatoavana.
2. Avelao ny tenanao hanaiky ny foto-kevitra momba ny fandavana sy ny fitsikerana.
Tadidinao ve ny fotoana iray nahadiso fanantenana olona na tsy nahatanteraka ny fanantenany?
ny fomba hanajana ny sipanao
Angamba ny ambony dia nandà ny zavatra nomaninao, toy ny fampisehoana na tetikasa iray. Na mety tsy nahomby tamin'ny fe-potoana farany lehibe ianao.
Eritrereto ny fomba namerenanao ilay toe-javatra ary diniho izay nianaranao avy amin'izany. Azo inoana fa nahazo betsaka noho ny very ianao raha ny zavatra niainanao.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia afaka manomboka mankasitraka ny tsy fankasitrahana sy ny fitsikerana ianao ho endrika fanehoan-kevitra manampy anao hitombo sy hivoatra.
3. Mivoady mba hitombo fa tsy misy fisainana miorina fotsiny.
Afaho ny tenanao amin'ny filàna fankatoavana avy amin'ny antoko fahatelo amin'ny alàlan'ny laharam-pahamehana ny fanatsarana sy ny fianarana tsy tapaka.
Ao amin'ny bokiny mitaona fanahy fisainana (2006), ny psikology Carol Dweck dia nanamarika fa ireo izay nanana fihetsika tsara sy niady tamin'ny fahaiza-manao mivelatra sy ny fahaiza-manao no tena mety hahatratra ny tena tanjony farany. Nantsoiny hoe ' fisainana fitomboana . '
Ireo manana ‘fisainana raikitra’, etsy ankilany, izay nihevitra ny fanehoan-kevitra / fanakianana ho mariky ny tsy fahombiazana na ny tsy fankasitrahana, dia voafetra hatrany amin'ny zava-bitany.
Raha azonao atao ny manomboka mahatakatra fa ny lanitra no fetra hanatsarana, hitombo ary hahombiazana, ny fahatongavanao tsy tapaka amin'ny faneken'ny hafa dia ho fahatsiarovana lavitra.
4. Tsy ny vokany rehetra akory.
Mametraka ny tenanao fotsiny ianao amin'ny tsy fahombiazana sy ny fahadisoam-panantenana raha apetrakao amin'ny fanantenana manokana ny fanantenanao izay mety tsy voafehinao.
Ohatra, mety mikendry ny hampisondrotra ny asanao ianao ary hivoaka hitady izany. Mety tsy mandeha tsara anefa ny orinasa, na izany aza, ary mety tsy hisy intsony ny vola ao anaty vilany. Ka hiafara ianao mahatsiaro tena ho tsy misy dikany ary tsy misy ny fanamarinana tadiavinao.
Fa kosa, hevitra tsara kokoa ny mifantoka amin'ny 'fizotrany' fa tsy ny valiny amin'ny alàlan'ny fanaovana tena ilaina amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fahombiazana na ny fahaizan'ny fandaminana.
Ireo fanatsarana ireo dia mety hahamarika anao ary mety hiafara amin'ny fiakarana karama tadiavinao.
5. Minoa fa manana ny zonao rehetra ianao - mijoroa amin'ny tenanao!
Raha te hampijanona ny fitondran-tenanao mitady fankatoavana ianao dia mila mahatakatra fa manan-jo hanana ny zavatra inoananao sy ny eritreritrao ary ny hevitrao ianao.
Mety tsy manana fomba fijery mitovy amin'ny olon-kafa ianao, saingy tsy midika izany fa samy mety na diso ny iray aminareo.
Azonao atao ny manaja ny zon'ny hafa amin'ny heviny manokana, fa tsy maintsy manaja ny zonao mitovy aminy ihany koa ianao.
Mety handresy lahatra izy ireo, amin'izay dia tsara ny manova ny fomba fijerinao momba an'io. Na izany aza, manan-jo tanteraka hifikitra amin'ny basy ianao raha tsy manao izany. Ny hevitrao dia mitombina tahaka ny an'ny olon-kafa rehetra.
Mbola tsy azonao antoka izay hatao momba ny fikatsahanao fankatoavana tsy tapaka? Miresaha amin'ny mpanolotsaina iray androany izay afaka mitarika anao mandritra ilay fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
sonia tovovavy te hampiaraka aminao
inona no eritreretin-dry zalahy rehefa mibanjina ny masonao izy ireo
tononkalo ho an'ny olon-tiana iray izay nodimandry
lohahevitra horesahina amin'ny namana
nandainga tamin'ny sakaizako aho hoe ahoana no hanamboarako azy